You are here: Home Other [SHAN] History [SHAN] ရဳꨲꨅဝꨤင္ꨲ မူိင္းꨡုင္းပြင္ꨲ - ꨁုꨓ္ယုင္းꨁꨱဝ္
In Ethnic Group
LATEST UPDATE [SHAN]
သမႅင်းမၢၼ်းတလေး ဢမ်,ပႃႇလႃႇမၢၵ်ႇမူင်ႈၶမ်း - ၸဝ်ႈၸရေး လုင်းၸၢႆးထုၼ်း
လိၵ်ႈလႄႈတႆး တႆးလႄႈလိၵ်ႈ - ၶူးမေႃလူင် လုင်းၸႆးဢွင်ႇထုၼ်း
The Tai Ethnic Migration and Settlement in Myanmar - U Sai Aung Tun
How Much Do We Know About PangLong Agreement Treaty and to what extent can we live up to the principles stated in it?
ဝန်းသိုစော်ဘွားများနှင့်စော်ဘွားများ၏ဘွဲ့၊ အစီးအနင်းများ - ဒေါက်တာစန္ဒာစိုး (လက်ထောက်ကထိက၊ သမိုင်းဌာန၊ မုံရွာတက္ကသိုလ်)
သုတေသနပြုစုနည်း အမျိုးမျိုး - စဝ်ထွန်းမှတ်ဝင်း (မဟာဝိဇ္ဇာ - ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်)
Category: Article in Shan
Published on Sunday, 27 November 2016 14:48
eBook file size: 52.5 MB
ebook pages: 384
Publication: ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ အုပ်ရေ ၂၅ဝဝ။ ယောဂီပုံနှိပ်တိုက်မှ ရိုက်နှိပ်ပြီး၊ မနော်ဟရီစာပေတိုက်၊ ရန်ကုန်မှ ဖြန့်ချိသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံတော် သာသနာရေးဦးစီးဝဘ်ဆိုက်မှ ရယူပြီး ပြန်လည် ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။)
အဂတိတရား - စဝ်ထွန်းမှတ်ဝင်း
ကက္ကူ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
Published on Thursday, 17 November 2016 09:18
"ကက္ကူ" ဆိုတဲ့နာမည်က ဆန်းလို့၊ ဘာအဓိပ္ပါယ် ရှိသလဲ မေးမိတယ်၊ တောင်ကြီး အနောက် ၂၆ မိုင်ကွာမှာ ရှိတယ်။ အစက နေ့​စဉ်စျေး မဟုတ်ဘဲ၊ တစ်ပတ်တစ်ခါ ဆိုသလို စျေးနေ့ ရှိတဲ့နေရာ၊ အရောင်းအဝယ် စခန်းငယ်ကလေး ဖြစ်ခဲ့ ဟန် တူပါတယ်။ ဉာဏ်တော် ဆယ်တောင်လောက်ရှိတဲ့ စေတီလေးတွေ အများကြီး (၂၇ဝဝ ကျော်) စုပြီး တည်ထား တာ။ လက်ရာတွေကို ကြည့်ပြီး ခရစ်နှစ် ၁၈ဝဝ ဝန်းကျင်က တည်ထားတယ်လို့ ခန့်မှန်းတယ်။
Read more: ကက္ကူ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
The Little Known Snow-Land Of Myanmar - U Sai Aung Tun
Published on Saturday, 12 November 2016 13:34
eBook file size: 80.9 KB
ebook pages: 3
Publication: Extracted from "Selected Writings of U Sai Aung Tun" Book, Myanmar Historical Mission, Yangon, Myanmar, 2004.
Sai Aung Tun: History of the Shan State from its Origins to 1962 - Reinhard Hohler
ၸိမ်းတူၺ်းလႄႈ ဝၢၼ်ဢိူဝ်ႈ - ၶႂၢၼ်သႅင်(လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း)
BIBLIOGRAPHY OF THE TAI'S By Sai Aung Tun
Interview with Ajarn Sai Aung Tun
ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ်ၼႂ်း မိူင်းတႆး - လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း
ကက္ကူမွေတော် ၃ဝဝဝ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
Published on Wednesday, 16 November 2016 15:15
တောင်ကြီးအနောက် ၂၆ မိုင်ကွာမှာ ဘုရားစေတီငယ် သုံးထောင်နီးပါး တစ်စုကြီး တွေ့ရလို့၊ ကက္ကူဘုရားတောနာမည်နဲ့ စာတမ်းတစ်ခုကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း (၂ဝဝ၃) ၃၇-၃၉ မှာ ထည့်လိုက်တယ်။ အချုပ်ကို ပြောရရင်
Read more: ကက္ကူမွေတော် ၃ဝဝဝ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
တိုင်းခမ်းတီ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏သမိုင်း၊ ဘာသာ၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုစာတမ်း - စဝ်နွဲ့ဆားတော်
Published on Thursday, 10 November 2016 14:52
eBook file size: 147 KB
ebook pages: 9
Publication: ကျိုင်းတုံမြို့ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူးပွဲ(၂ဝ၁၂ ခုနှစ်)တွင် ဖတ်ကြားခဲ့သည့် "ရှမ်းအမွေအနှစ်စာတမ်းဖတ်ပွဲ"မှ စာတမ်းများစာအုပ်မှ ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်သည်။ ဤစာအုပ်ကို အေးပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်မှ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် ပုံနှိပ်သည်။
A Shan Settlement of Hkamti Long Area (U Sai Aung Tun)
​မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားမှ ကောင်းမူးလုန်စေတီ - ရာမညကိုကိုနိုင်
တိုင်းခန္တီးလုံသမိုင်း - စဝ်နွဲ့ဘိတောင်း
"Bamboo" In Daily Life Of "Simple Shan" - Sai Kham On (Namkham)
အလှူမီးရှုခံ သီချင်းများ - ရွှေကူနန်းနွဲ့နွဲ့
နမ့်စန်ချင်း - ပျဉ်းမနားအုန်းမောင်